Nanangana fifanarahana fifanarahana vaovao ny South Africa Airways sy ny Alaska Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nanangana fifanarahana fifanarahana vaovao ny South Africa Airways sy ny Alaska Airlines
South Africa Airways (SAA), ilay kaompaniam-pirenen'i South Africa sy Alaska Airlines, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dimy lehibe indrindra any Etazonia, dia nanambara androany fa nanangana fiaraha-miasa vaovao izy ireo, izay manome safidy sidina vaovao sy mety ho an'ny mpanjifa SAA sy Alaska mitety an'i Amerika Avaratra sy Afrika. Raha misy vokany eo noho eo, ny mpanjifa dia afaka mividy làlana tokana ho an'ny dia amin'ny sidina samy mpitatitra amin'ny fifanakalozana tsotra iray ary hankafy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena New York-John F. Kennedy sy ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Washington-Dulles eo anelanelan'i Etazonia Avaratra Amerikana mivelatra. tambajotra ary toerana 75 mahery atsy Afrika atolotry ny SAA sy ireo mpiara-miombon'antoka isam-paritra. SAA sy Alaska Airlines izao dia hanolotra safidy bebe kokoa amin'ny fivezivezena eo amin'ny toeran-kaleha manerana an'i Afrika sy ny tsena lehibe amin'ny morontsiraka andrefan'i Etazonia, ao anatin'izany; Seattle, Los Angeles, San Francisco ary Portland.
Ity fifandraisana vaovao ity dia hanolotra fampitomboana ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny famelana ny dia amin'ny bileta elektronika tokana ary amin'ny alàlan'ny famindrana entana eo anelanelan'ny fisoratana anarana amin'ny SAA na Alaska Airlines any Etazonia na Afrika. Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena New York-John F. Kennedy sy seranam-piaramanidina Washington-Dulles no vavahady amerikana avaratra any SAA ho any Afrika, ary ny fiaraha-miombon'antoka vaovao miaraka amin'ny Alaska Airlines dia hanome fifandraisana sy traikefa an-dalambe ho an'ny mpandeha mandritra ny diany manontolo.
Mirehareha i Alaska amin'ny fandefasana ny saran-dàlana ambany indrindra miaraka amina serivisy tena izy sy serivisy tena izy ary mikarakara azy. Eny ambony sambo, ny vahiny dia afaka mankafy sakafo sy zava-pisotro noforonina miaraka amina tsiro mamelombelona sy mamirapiratra aingam-panahy avy amin'ireo akora West Coast. Miaraka amin'ny fialam-boly tsy dia mazava ataon'i Alaska, ny flyers dia afaka mijery sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra mihoatra ny 500 - maimaimpoana amin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo daholo ary mankafy mandefa hafatra an-tsokosoko mandritra ny rivotra.
"Ity fiaraha-miombon'antoka ifarimbonana ity dia ahafahan'ny SAA sy ny Alaska Airlines manitatra ny tambajotran-dry zareo mba hanomezana fifandraisana akaiky indrindra sy mora indrindra eo amin'ny tanàn-dehibe amerikana amoron-tsiraka andrefana sy toerana tena mahavariana manerana an'i Afrika," hoy i Todd Neuman, filoha lefitra amerikana Avaratra ho an'ny South Africa Airways. “Ny mpanjifa amin'ny zotram-pitaterana an'habakabaka roa dia hankafy ny fandraisam-bahiny fanta-daza an'i Afrika Atsimo sy ny serivisy mafana sy manetriketrika any Alaska mandritra ny diany avy amin'ireo kaompaniam-pitanterana roa nahazo loka.”
Horohoron-tany mafy tany El Salvador
Fanapahan-kevitry ny fitsarana: Tsy teraka toy izany ny olona LGBTQ
UN ka hatramin'ny G7: Ny famokarana vaksinin'ny COVID-19 azo antoka dia tsy maintsy mihoatra ny tombom-barotra
Ny sidina tsy miato avy any San Jose mankany Boston dia miverina amin'ny JetBlue